downloads 23 678
ProjectOpen Sky, ụlọ fichier readme
Nke a bụ ụgbọelu nke Air France na-ejikarị maka ụgbọ elu mpaghara. Ihe nlereanya na udiri ederede dị iche iche. Anyị ahụkarịbeghị add-on nke di nma. I gaghi emechu gi ihu. Ogwe ọrụ na ụda dị mma.
The CRJ200 na kwadoro site na abụọ turbojets General Electric CF34-3B1 amụba a elu ọnụ, nzube bụ isi 8729 lbf (38.83 kN) na takeoff. Na a cruising ọsọ nke 464 mara akpụ ruo (860 km / h), ọ nwere ike ife efe 1,915 amụ ka kilomita (3,547 km) na a zuru ibu 50 njem.
The CRJ200 bụ 87 ụkwụ 10 sentimita asatọ (26.77 m) ogologo na ya kacha takeoff arọ nke 53,000 pound (24,041 n'arọ). Ya mbịne dịpụrụ adịpụ ruo nke 180 degrees bụ naanị 75 ụkwụ (22.9 m) na ala, ihe dị mkpa ọdụ ụgbọelu na-esiwanye ọrụ n'aka.
Bombardier Aerospace ugbu a na-enye abụọ nsụgharị nke CRJ200. The CRJ200 CRJ200 Ea na LR. The version na agbatiri nso (Ea) e ji a kacha takeoff arọ nke 51,000 pound (23,133 n'arọ) na a nso nke 3547 km. N'ikpeazụ, n'ebe dị anya passable version (LR) egosiputa a kacha takeoff arọ nke 53,000 pound (24,041 n'arọ) na a nso nke 2 880 km
Engines ọ bụla version nwere ike ju inye ugbo elu ahụkebe arụmọrụ na-ekpo ọkụ weather n'ọdụ ụgbọelu na elu karị, si otú amụba payload ya mere profitability. (Wikipedia)
Onye edemede: ProjectOpen Sky, ụlọ faịlụ readme